China API 602 globe mpanamboatra sy mpamatsy valiny | Newsway
FAMAROTANA Vokatra: habe: NPS 1/2 ka hatramin'ny NPS2 (DN15 ka hatramin'ny DN50) Filaharana faneriterena: Kilasy 800, Kilasy 150 ka hatramin'ny Kilasy 2500 MATERIALY: Sora-tanana (A105, A350 LF2, A182 F5, F11, F22, A182 F304 (L), F316 (L), F347, F321, F51), Alloy 20, Monel, Inconel, Hastelloy STANDARD Design & fanamboarana API 602, ASME B16.34, BS 5352 Fifandraisan'ny MFG farany nifanatrika - Flange Ends to ASME B16.5 - Socket Weld dia mifarana amin'ny ASME B16.11 - Butt Weld dia mifarana amin'ny ASME B16.25 - Faran'ny scrued mankany amin'ny test ANSI / ASME B1.20.1 & amin'ny ...
Habe: NPS 1/2 ka hatramin'ny NPS2 (DN15 ka hatramin'ny DN50)
Fitaovana faneriterena: Kilasy 800, Kilasy 150 ka hatramin'ny kilasy 2500
sandoka (A105, A350 LF2, A182 F5, F11, F22, A182 F304 (L), F316 (L), F347, F321, F51), Alloy 20, Monel, Inconel, Hastelloy
Famoronana sy fanamboarana API 602, ASME B16.34, BS 5352
Tapitra ny fifandraisana - Flange Mifarana amin'ny ASME B16.5
1.Ny vy vy, ny visy ary ny zioga, ny fiakarana,
2. Handwheel tsy miakatra, Backseat tsy miverina,
3. Nahena ny seranana na seranana feno,
5.SW, NPT, RF na BW
6. Bonnet mifono vy ary Bonnet misy tombo-kase fanerena, Bonnet Bonts,
7.Ny kofehy mafy, peratra seza azo havaozina, Gasket Wound Sprial,
Valan-javaboary NSW API 602 manerantany, ny ampahany manokatra sy manidy ny valizy vavahady vy vita amin'ny bonnet bolt no vavahady. Ny làlan'ny fivezivezan'ny vavahady dia mifandraika amin'ny làlan'ny tsiranoka. Ny valizy vavahady vy vita amin'ny foroka dia azo sokafana sy akatona fotsiny, ary tsy azo ovaina sy voahidy. Ny vavahadin'ny vavahady vy vy sandoka dia misy etona famehezana roa. Ny habaka famehezana roa amin'ny valizy vavahady mahazatra indrindra dia mamorona endrika miendrika, ary ny zoro zana-kazo dia miovaova arakaraka ny masontsivana. Ny maodelin'ny fiara misy valves vavahady vy:
Ny famehezana ny valin'ny vavahady vy vita amin'ny vy dia tsy azo fehezina afa-tsy amin'ny tsindry antonony, izany hoe, ny tsindry antonony dia ampiasaina hanindriana ny tampon'ny tombo-kase ny vavahady mankamin'ny seza valizy amin'ny lafiny iray hafa mba hahazoana antoka ny fisian'ilay tombo-kase, izay famehezana tena. Ny ankamaroan'ny valves vavahady dia voatery mamefy, izany hoe rehefa mikatona ny valizy dia ilaina ny manery ny takelaka vavahady manohitra ny seza valizy amin'ny alàlan'ny hery ivelany mba hahazoana antoka ny famehezana ny velaran'ny famehezana.
Ny vavahadin'ny vavahady vavahady dia mihetsika mitanjozotra miaraka amin'ny vatan'ny valizy, izay antsoina hoe valizy vavahady fiakarana (izay antsoina koa hoe valizy vavahady misokatra). Matetika misy kofehy trapezoid amin'ny tsorakazo fampiakarana. Ny voanjo dia mihetsika avy eo an-tampon'ny valva sy ny làlan'ny torolàlana eo amin'ny vatan'ny valva mba hanovana ny fihodinan'ny rotary ho lasa tsipika mivantana, izany hoe ny tselika miasa ho ao anaty fanosehana.
Tombony amin'ny valizy vavahady vy
1. Fanoherana ambany tsiranoka.
2. Ny hery ivelany takiana amin'ny fanokafana sy ny fanidiana dia kely.
3. Tsy voafetra ny fitarihan'ny onjam-peo.
4. Rehefa misokatra tanteraka dia kely kokoa ny fikaohon'ilay velaran-tany famehezana amin'ny alàlan'ny mpanelanelana miasa raha oharina amin'ny valvam-bolan'izao tontolo izao.
5. Tsotra ihany ny endrika ary tsara ny fizotran'ny fanariana.
Teo aloha: Valizy vavahady API 602
Manaraka: C95800 globe API API 602
Api 602 Valve Globe
Valizy fanamarinana piston API 602
Valve amina vavahady flange
Valve Angle A105
Valizy API 602 Aluminium Varahina